Xildhibaano ayaa qaba in Xeerka Hanti-Dhawrka qodob-qodob loo ansixiyo – Kalfadhi
Xildhibaano ayaa qaba in Xeerka Hanti-Dhawrka qodob-qodob loo ansixiyo
Ugu yaraan 12 Xildhibaan, oo ka tirsan Xubnaha Golaha Shacabka, ayaa codsaday in qodob-qodob loo ansixiyo Sharciga Xafiiska Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka. Xildhibaanadan waxay diidan yihiin in Hindisahan si guud cod loogu qaado, iyagoo aaminsan in ay gudihiisa ku jiraan qodobbo ula muuqda in mid-mid loo dul istaago, intaan si guud loogu wada codeyn.
Codsigooda, oo ay u gudbiyeen Shir-Guddoonka Golaha, ayaa u qaran “Mudane Gudoomiye, annagoo ogsoon waqtiga dheer ee uu soo maray Hindise Sharciyeedka Dhismaha Xafiiska Hanti-Dhowrka iyo baahida loo qabo sharcigaan, haddana waxaa muhiim ah in Hindise Sharciyeed kasta oo ka gudbaya Golaha in si dhamaystiran loo hubiyo, loogana tala bixiyo. Sidaasdarteed, waa in loo kor istaagaa oo loogu codeeyaa qodob-qodob”.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo ka mid ah Xubnaha qaba fikirka ah in Hindisaha Sharciga Hanti Dhowrka Qaranka loo dul istaago qodob qodob, ayaa yiri “waxba maqaban karo Hanti-Dhowr loo magacaabo sida agaasime oo kale, oo marna xilka uu u magacaabo Madaxweynaha marna uu ka qaado, iyadoon cidna lagala tashan. Waxaan rabnaa Hanti-Dhowrka wanaagsan oo uu Baarlamaanku siiyo awoodda, kana qaadi karo marka loo baahdo”. Sida uu Dalxa ku doodayo, waxa ay xildhibaanada qaba in qodob-qodob loo ansixiyo hindisaha ka walaacsan yihiin awoodda uu Madaxweynuhu u lee yahay xilal u magacaabidda iyo ka xayuubinta xafiiskaas.
Waxaa kale oo uu Xildhibaan Dalxa rumeysan yahay in sababta uu meel-marka Hindisahan u qaatay waqti dheer ay tahay in la siyaasadeynayo. Waxa uu yiri “sharcigaan waxaa gacanta ku haya Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka, oo aan ognahay inuu u kala jabay laba dhinac oo ah mucaarad iyo muxaafid, taasoo keeni karta in wax kasta la siyaasadeeyo, waana taas culeyska saaran sharcigaan”.
Xildhibaanku waxaa kale oo uu qabaa in Hindise Sharciyeedkan la waafajiyo “hanaanka” buu yiri “ ay Soomaali wax ku qaybsato”. “Sharcigaan waa in uu ka dhax muuqdaa hanaanka awood qaybsiga ee beelaha, si Xafiiska Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka ay xubno ugu yeeshaan beelaha yar-yar, oo hada ka maqan Xubnaha Sare ee Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud, maadaama hadda wax lagu qaybsado hanaan beeleed” ayuu yiri Dalxa.
Hindisaha Sharciga Hanti Dhowrku waxa uu maray aqrinta 3-aad, waxaana codayntiisa 21-kii bishan dib uga dhigay Guddoonka Golaha Shacabka, kabib markii waqtiga intiisa badan ay qaadatay aqrinta War-Bixinta Hindisaha, iyada oo mar labaad 24-kii bishaan oo uu kutalagalka Goluhu ahaa in loo codeeyo ay haddana ku dhacday in uu Goluhu waqti u waayey, kadib markii inta badan waqtigii ay qaadatay dooddii Miisaaniyadda 2018-ka. Maanta, oo la filayey inuu ajandaha Golaha ku jiri lahaana, waxaa baaqday kulankii Golaha Shacabka ee maanta.
Xildhibaanada saxiixay soojeedinta in aan mar loo wada codeyn Hindisaha Sharciga Hanti-Dhowrka Qaranka waxaa ka mid ah: 1) Cusmaan Xaaji Cali, 2) Faarax Cabdi Xasan, 3) Maxamed Axamed Abtidoon, 4) Cabdullaahi Bidhaan Warsame, 5) Xuseen Qaasim Yuusuf, 6) Burhaan Adan Cumar, 7) Suudi Diiriye Carab, 8) Duniyo Maxamed Cali, 9) Cabdow Maaxi Faarax, 10) Maxamed Cumar Dalxa, 11) Saalax Axmed iyo 12) Sadiiq Xirsi Warfaa.
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta oo baaqday